E-News Nepali || Fast and Accuracy » यी दुई सांसद दम्पती : नेकपा विभाजनपछि श्रीमान प्रचण्डतिर, श्रीमती ओलीतिर !
यी दुई सांसद दम्पती : नेकपा विभाजनपछि श्रीमान प्रचण्डतिर, श्रीमती ओलीतिर !
काठमाडौं, ७ पुस । संसद विघटनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा दुई पक्षले आ-आफ्नो पक्षबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरु राखिरहेका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएको केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितीको बैठक राख्दै विभिन्न निर्णयहरु गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले पनि केन्द्रीय कमिटीको बैेठक चलाइरहेका छन् । शीर्ष नेताहरु आफू निकटका नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने दौडधुपमा छन् भने नेताहरुपनि आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्दै कोही ओली त कोही प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बैठकमका सहभागी भएका छन् ।
तर राजनीतिक कित्ता विभाजित हुँदा नेता रघुबीर महासेठको श्रीमान र श्रीमतीको पनि कित्ता विभाजित भएको छ । जसमा बिगत लामो समयअघिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको विस्वास पात्रका रुपमा रहेका रघुबीर महासेठ प्रचण्ड नेपाल पक्षमा लागेका छन् भने उनकी श्रीमति जुली महतो ओली पक्षमा लागेकी छन् ।
जुली बिहान बालुवाटारमा आयोजित ओली पक्षको केन्द्रीय समितीको बैठमा उपस्थित थिइन् । उता पूर्व मन्त्रीसमेत रहनु भएका महासेठ भने अहिले जारी प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय समितीको बैठमा सहभागी छन् । रघुवीर महासेठ र जुली महतो दुबै प्रतिनिधि सभामा नेकपाका सांसद हुन्।
प्रकाशित मिति ७ पुष २०७७, मंगलवार १७:०६
भर्खरै आमाबुवा रातभर मोबाइलमा व्य’स्त, ओ’छ्यान’बाट ख’सेर १९ म’हिने छो’रीको मृ”त्यु’
मास्क लगाउन अटेरी गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छुः सीडीओ शर्मा
एमाले बाट निर्वाचित वडा अध्यक्षलाई कालाेमाेसाे सहित राम धुलाइ
“दुई तिहाई बहुमत दिनुस, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक फिर्ता गरेरै छोड्छु” : केपी शर्मा ओली
चर्चित बंगलादेशी अभिनेत्री रायमा बन्द बोराभित्र शरिर दुई टु;;क्रा भएको अवस्थामा मृ;;त भे;;टिइन् ‘भिडियो सहित
भर्खरै सानी छोरीसंग खेलेर बाई छोरी भन्दै हिँडेका लाहुरे सरोज, त्यसपछि घर फर्कन पाएनन् (हेर्नुस् )